Izilwane zingabhalwa noma zifakwe uphawu ngensimbi efudumele noma efriziwe. Abanye abalimi nabo bathola imvume ekhethekile yokusebenzisa ezinye izindlela zokufaka uphawu lokufaka uphawu, ikakhulukazi ama-microchips asetshenziselwa izilwane eziphakeme kakhulu.
Ukukhathazeka kuye kwaphakanyiswa mayelana nesistimu yokuhlonza isilwane samanje, nomthetho osalungiswa ophrintiwe ngo-2018 – Idokhumenti Yomhlahlandlela Wendlela Yokukhomba Ukutholakala Kwezilwane eNingizimu Afrika - ukugqugquzela ukusetshenziswa kwamathegi endlebe epulasitiki okuyizinto ezibonakalayo eziyinhloko zezinkomo, izimvu, izimbuzi, izingulube aquaculture. Ubuhle wukuthi amathegi e-ear ayesebenze kakhulu eminyakeni, futhi manje ehlonyelwe ukuhlonza imvamisa yomsakazo, okwenza kube lula ukugcinwa kwamarekhodi epulazini.
Ukuphawula Ngensimbi Eshisayo
Ngokomhlahlandlela womlimi ukuvimbela nokuphatha ukubiwa kwesitokisi se-National Stock Theft Prevention Forum, kulula kakhulu ukusebenzisa insimbi ehlukile kumlingisi ngamunye wephawu lokukhomba. Ukulandelana komklamo nokushisa kungahlolwa ehlathini ukuze kuqinisekiswe ukuthi kulungile ngaphambi kokuba isetshenziswe esilwaneni.
Kungcono ukuthi ube nomsizi ongaphezu kweyodwa futhi ukhethe izilwane emgodini ochotshozayo. I-immobilizer noma i-halter-halter kufanele isetshenziselwe ukuvimbela isilwane ekukhawuleni umphathi.
Insimbi izoba nombala ompunga emlilweni lapho ilungele ukusetshenziswa futhi ibekwe, hhayi ucindezelwe, ngokumelene nesilwane senkomo ngamanani amathathu amancane. I-ice noma amanzi abandayo angasetshenziswa ukupholisa isilonda. Umqondisi uxwayisa ngokukhethekile abalimi ukuthi bangasebenzisi umquba noma basula isilonda ngendwangu, njengoba lokhu kungaholela ekutheleleni.
Ukushicilela ukukhishwa kwemikhiqizo kubhekwa njengobuntu abaningi kunokushisa kwe-iron, kodwa akuphumelelanga njalo futhi kuhilela imishini ebiza kakhulu. Isilwane kufanele sivinjelwe ekukhayeni nge-immobilizer noma i-knee-halter futhi kufanele kube nomuntu onokusiza. Izinwele kufanele zihlutshwe endaweni lapho zizofakwa khona uphawu.
Insimbi, okumele ibe namandla kunaleyo esetshenziselwa ukushisa i-hot iron, isilahlile ngaphansi kwe-nitrogen noma i-ice eyomile nge-methylated spirits, kuze kube yilapho insimbi iyeka ukunikeza ama-bubbles. I-nitrogen eyengeziwe noma imimoya kufanele ikhutshwe ngaphambi kokuba isilwane sibhalwe, ukuvimbela ukugeleza.
Umhlahlandlela womlimi wokuvimbela nokuphatha ukwebiwa kwezimpahla ukhuthaza abalimi ukuba bacindezele kanzima ukuya ku-20 kuya ku-25 wesibili ngezinyanga ezinyangeni eziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili, imizuzwana engu-25 kuya kwezingama-30 izilwane ezinyangeni eziyisishiyagalolunye kuya kweziyisishiyagalombili namasekhondi angu-30 kuya kwangu-35 izilwane ezingaphezu kuka-18 izinyanga.
Ukudweba amathambo kwenziwa nge-pliers neyinki. Izindlebe zihlanjululwe kusengaphambili ukuvimbela inkinobho ukuba ingaboni. Amapulangwe we-tattoo kufanele agonywe kuze kube yizimbobo ezibonakala esikhumbeni bese inkino kufanele ihlutswe emgodini.
Ngendlebe yokubeka uphawu lwesigxilisa sesilisa nesesigqebeni salo mkhakha zimi ngakwesokunene kwendlebe bese zihlanganiswa kanye nomfakisicelo. Ukusetshenziswa kwamathegi ahlukahlukeneko noma ukumaka izindlebe ezahlukene kungavumela umlimi ukuba ahlukanise phakathi kwezilwane ezahlukene.